CABBITAANKA CABITAANKA DIGAAGGA DHALADA: DHOWR SIYAABOOD OO AAD ADIGU SAMEYSID - BEERAHA DIGAAGA
Sida loo cabbo khamriga loogu talagalay digaagga dhalada gacmahooda
Caanaha cabitaanka ayaa ku jira liiska qalabka lagama maarmaanka u ah digaagga sii kordhaya. Muhiim ma ahan in alaabtan loo iibsado sidii badeecad dhamaystiran, waxaa laga dhisi karaa alaabta laga heli karo beerta. Iyo habka wax soo saarka laftiisu waa mid sahlan.
Noocyada cabbitaanka foornada
Hantida ugu weyn ee cabitaanka ka samaysan dhalada waa u roonaanta mulkiilaha inta lagu jiro dayactirka, iyo sidoo kale raaxada shimbiraha inta lagu jiro hawlgalka sheyga. Buuxinta biyaha, isbeddelka dareeraha iyo dhaqidda waa in aan la soconin dhibaatooyin kasta, khaasatan haddii ay jiraan shimbiro badan oo ku jira hudheelka oo badanaa waxaa loo adeegaa. Daryeelka fudud ee mulkiiluhu waa in bacda biyaha ay bilaash u tahay buuxinta. Intaa waxaa dheer, qalabku waa inuu si habboon u hirgeliyaa ujeedadiisa ugu weyn - digaagga waa in uu biyo ka cabbaa iyada oo aan wax caqabad ah lahayn.
Waa muhiim! Sidaas darteed jirka digaaggu ma noqdaan fuuqbax, waxay u baahan tahay in la keeno qiyaastii 0.5 litir oo biyo ah maalin kasta. Qadarka dheecaanka waa in la hagaajiyaa iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada iyo cuntada. Ku shub biyo dheeraad ah xayndaabka xilliga xagaaga, iyo sidoo kale kordhinta qaybo ka mid ah cuntada qalalan ee digaaga.
Daryeelka gaarka ah waa in la bixiyaa si loo ilaaliyo dhismaha. Dhinacyada waa in aysan aheyn mid fiiqan, sidaa daraadeed digaaggu ma xoqin oo gooyee. Ujeedadaas awgeed, geesaha ayaa lagu duubay ama si fiican loo shaqeeyaa.
Sida for wax, in qodobkan waxaan tixgelinaynaa dhismaha si gaar ah ee caag ah. Qalabkani ma aha inuu oxidise oo uusan khatar ku ahayn shimbirta. Intaa waxaa dheer, balaastikadu waxay u dulqaadataa jawi qoyan. Sidaa darteed, ma cabsan kartid in boogta cabitaanka bacda ay halis u tahay caafimaadka.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato sida loo sameeyo cabitaanno loogu talogalay digaagga gacmahaaga.
Qalabka waa in loo sameeyaa adkaysi u ah wareega. Marka biyaha lagu shubo weel aan wax faaruq ah lahayn, shimbiruhu waxay badanaaba ku ridaan. Sidaa daraadeed qaab-dhismeedku uusan hoos u dhicin ama soo rogin, cabitaanku si adag ayuu u go'an yahay ama wuxuu ka dhigaa mid culus oo culus.
Xaaladda caafimaadku waxay ku xiran tahay sida nadiifinta biyaha ee digaagga u baabbi'iya. Taangiga ugu weyn ee biyaha waa inuu noqdaa mid gooni u ah sida ugu macquulsan si aan shimbiruhu u fuulin oo aan biyaha u jiidin si kale. Tani waxay yaraynaysaa khatarta jirooyinka uurjiifka galaya dareeraha.
Ma taqaanaa? Digaagii hore ee digaagta waxay qaateen ukun buluug ama cagaaran. Ninkani noocan oo kale ah ayaa la siiyay shimbir oo sharaf ka ah qabiil Hindi ah oo ka yimid Koonfurta Ameerika, halkaas oo uu ka yimaado. Midabkii ugu fiicnaa ee qolofku wuxu kacay kacdoonkii fayruska kaas oo la geliyay DNA-da hoyga, kaas oo horseeday in si baaxad leh loo xoojiyo xayawaanka xitaa xayawaanka pigment. Xaqiiqadani wax saameyn ah kuma yeelaneyso tayada ukunta, marka laga reebo midabka, aysan ka duwanayn qaababka caadiga ah.
Dhalada dhalada oo fudud ka dhalada
Dhismaha Vakuumta, sida magaca ayaa tilmaamaya, biyo waxay u soo saartaa meel banaan. Isla mar ahaantaana, biyaha ayaa galaya khamriga markii loo baahdo. Sida ugu dhakhsaha badan shimbiraha cabo biyaha, taangiga ayaa dib u buuxiya. Noocaan cabitaanka ayaa aad u fudud in la sameeyo.
Si loo dhiso dhismo fudud oo fudud, waxaad u baahan tahay inaad iska hubiso qalabka iyo qalabka soo socda:
10 litir oo litir oo caag ah oo leh caag;
weel kasta oo qoto dheer oo qoto dheer oo dhererkeedu yahay 10 litir (maydhin ama basin);
suunka ama mindiyaha qalabka.
Si digaagga loogu raali galiyo milkiilayaashooda leh koboc wanaagsan iyo wax soo saar, waxay ku haboon tahay in la daryeelo meel loogu talagalay tarankooda. Baro sida loo dhiso coop digaag, oo si madaxbannaan u qalabaynaya hawo iyo iftiin, ku samee buulal ku samee digaagga.
Habka wax soo saar
Tilaabooyinka talaabooyinka talaabada:
Dhalada dhalada leh mindi qalabaysan ama qoob-ka-shaqeeyaa godka. Dhegaha daloolka waa 6-7 mm, masaafada ka soo jeedda waa inay ahaataa qiyaastii 5cm, Si kastaba ha ahaatee, fogaanta hooseysa waxay ku xiran tahay tuubada aad ku qasban tahay dhalada. Haddii ay tahay qoto dheer, markaa, siday u kala horreeyaan, iyo daloolku wuxuu u baahan yahay in la sameeyo wax yar ka sarreeya.
Ku buuxi dhalada biyo iyo ku xir qaybta la xushay.
Hermetically xiro weelka leh daboolka.
Biyaha ayaa joojin doona ka soo baxaya dhalada sida ugu dhakhsaha badan heerka dareeraha uu gaaro godka.
Alaabtaan waxaa laga dhisi karaa dhalada 5 litir.
Ma taqaanaa? Waxaa la ogyahay in iftiinka casaanka uu kuu ogolaanayo in aad si xoog leh u nabdid gardarrada digaagga. Sidaa darteed, 80s. qarnigii ugu dambeeyey, shirkadda AnimaLens (USA) waxay samaysay indhogalado digaag ah oo digaag ah. Waxaa la aaminsan yahay in badeecada ay gacan ka geysaneyso ka hortagga gardarrada shimbiraha. Si kastaba ha ahaatee, qalabku ma ahayn mid caan ku ah beeraleyda, sababtoo ah digaaggu way indho beeleen. Waqti dheer kahor (sanadii 1903), Andrew Andrew Jackson ayaa loogu talagalay muraayadaha digaagga. Hal mar, waxay si weyn u iibin jireen Maraykanka oo dhan, laakiin maanta Ku-meel-gaadhsiisku waa mid aad u adag in laga helo iibka, iyo UK si buuxda ayaa loo mamnuucay.
Nooca ugu adag ee cabitaanada fuuq-baxa ee dhalada
Cabbiraha waxaa laga samayn karaa dhalo caag ah adigoo isticmaalaya nidaam adag.
2.5 litir oo caag ah oo caag ah;
5 litir oo litir oo caag ah;
mindhicirka iyo mindhicirka;
Laga soo bilaabo dhalada 5-litir waxaad u baahan doontaa kor kaliya oo dabool leh. Si tan loo sameeyo, isaga jarjar, ka tag ¼ qaybta sare.
Ka fur xarkada weelka 2.5-litir oo ku dheji nalka korontada ilaa dhalada weyn. Ka dibna badeecadda ka soo saar kabaha ilaa qoorta 5-litir.
Qeybta sare ee weelka yar, samee god leh dhexroor ah 6-7 mm.
Ku diirso dhalada yaryar oo ku dheji kartid awood weyn oo la gooyey, oo ku dheji daboolka. Mustaqbalka, si aad biyo ugu shubtid dhalada 2.5 litir, ka dibna fur furka yar yar.
Biyaha ayaa ka soo baxa daloolka hore ee dhalo yar yar oo buuxiya dhalada weyn ee loo yaqaan 'cut-ka' cutubka kaas oo godka ku yaal.
Ka ilaali suunka taageerada (tusaale, derbi), waana diyaar u ah isticmaalka.
Waa muhiim! Cidhifyada dhererka 5-litir ee la jarjaray waa in ay ku taal meel ka sarraysa godka loogu talagalay marinka biyaha.
Cabbiraha caanaha dhalada ka soo baxa
Nidaamka waraabka ibta ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid horumar ah oo caan ah. Ka fikir qalabka ugu fudud ee noocan ah.
Si aad u dhisto naas nuujiye, diyaariso:
Dhalada 5 litir;
mindhicirka iyo mindiyaha qalabka.
Baro sida loo dhiso coop digaag ah xilliga jiilaalka adoo isticmaalaya gacmahaaga.
Naqshadeynta waxaa loo sameeyey sida soo socota:
Qeyb ka mid ah dhalada 5 litir oo leh cirbad, dufin god.
Geli ibta naaska.
Si dhammaystiran u gooy hoose ee weel caag ah si aad si sahlan ugu buuxin karto dhalada iyada oo loo baahan yahay.
Si sahlan iyo xoog leh, u hagaaji qaab-dhismeedka natiijada taageerada.
Waxaan rajeyneynaa talo-siinteena iyo talooyinkayaga ku caawiyeen inaad fahamto nuxurka tiknoolajiyada biyaha u ururinta haweenka. Nidaamka iskiis u samaysan wuxuu si macquul ah u yareeyn doonaa culayska maaliyadeed ee beertaada, isla mar ahaantaana, wuxuu ku faraxsan yahay waxtarka iyo fududaynta dayactirka. Ka dib oo dhan, kaliya bedelida nidaamka waraabinta ayaa si weyn u hagaajin kara nadaafadda guriga.